JEREMIA 7.16-8.3	F. 2, 5 | Fitandremana Ankadifotsy
JEREMIA 7.16-8.3	F. 2, 5
Mana isan'andro >
FIRENENA MADITRA TSY MANDRAY ANATRA
Tsy manaiky hiverina amin’Andriamanitra ny Zanak’Isiraely fa mafy hatoka manohy ny làlan- dratsiny : fanompoana ny volana aman-kitana (fanaon’ny Babyloniana izany), fanaovana sorona ankizy hanompoana an’i Moloka ! Ho fanampin’izany dia manampin-tsofina izy amin’ny mpaminanin’i Jehovah.
Aza mivavaka ho an’ity firenena ity ianao. Tsy mihaino an’Andriamanitra intsony ny vahoaka (24,26), koa tsy mihaino azy intsony koa ny Tompo. Firenena mizotra ho amin’ny fandringanana. Tsy anatra na zavatra moramora intsony no hanova azy fa kapoka mafy.
Vahoaka milona ao anatin’ny fanompoan- tsampy. Ankohonana mifanampy hanao fanatitra ho an’ny sampy (18). Mba hampahasosotra an’i Jehovah. Ny fahatezeran’Andriamanitra no hirehitra aminy ary hianjera amin’ny zava-boaary rehetra izany (20).
Ny fankatoavana no ankasitrahan’Andriamanitra mihoatra noho ny fanatitra. Tsy fombafomba hialàna amin’ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra ny fanaovana fanatitra fa natao kosa ho zavatra hita maso hanehoana ny fanoloran-tena sy fiderana an’Andriamanitra (22). Izay andrasan’Andriamanitra amin’ny olony dia fiainam-pankatoavana Azy (23). Saingy tsy izany no nataon’i taranak’i Joda (24-28).
Famaizana (29-34). “...Lavin’i Jehovah sy afoiny ny taranaka mahatezitra Azy” (29b). Fanaovana sorona ny tsy manan-tsiny amina andriamanitry ny jentilisa, hahita fahafatesana eo an-tanan’ny miaramila jentilisa izay nanao izany (32-34). Anisan’ny fitaovam-pamaizana ny Babyloniana. Haparitak’izy ireo ny taolam-balony (33) ary hofongariny koa aza izay efa nalevina (8.1)... mba hanatrehiny ny volana aman-kintana izay nivavahany (8.2). Izay sisa tsy maty kosa dia ho andevon’ireo jentilisa nalainy tahaka (8.3).
Fahamarinana : Ny fanekena nataon’i Jehovah dia nanehoany ny fahasoavany, fankatoavana no tokony asetrin’ny vahoakany izany.